Madaxweyne Xasan oo mar kale ka hadlay Arimaha Jubooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Xasan oo mar kale ka hadlay Arimaha Jubooyinka
Muqdisho (KON) - Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Maanta dalka dib ugu soo noqday ayaa wuxuu ka hadlay Arimaha Jubbooyinka oo hada ay ka taagan tahay xaalad Siyaasadeed oo aad u Cakiran.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya aysan doonayn dad kale oo meel kale laga keenay in Jubbooyinka la geeyo balse Dowladu ay doonayso in Dadka Gobalada Jubbooyinka fursad loo siiyo Agaasinka danahooda.
Wuxuu sheegay in dhamaan dadka Jubbooyinka daga, larabo inay ku dhex tashtaan shirka dib uheshiisiinta ah ee dowladda ay qabanayso halkaasina ay kasoo baxaan natiijooyin laguwada qanacsan yahay.
“Waxaa wax ugu dambeeya ee aanan jeclayn inaan maqalno ayaa ah in colaada dib ugu soo noqoto gobaladaasi oo Qabiil Qabiil iyo degmo degmo la isugu diriro taasina waxa ay fursad siinaysa Ururka Al-Shabaab inay xoogeestaan”ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhamaan shacabka gobalada Jubbooyinka daga wuxuu ugu baaqay inay dhamaatay xilligii isqab-qabsiga iyo is aamindarada,isaga oo sheegay in Soomaaliya hada ay leedahay dowladda awood leh oo aan KMG aheyn.